Yintoni iflexography? Imbali, inkcazo kunye neempawu ezisisiseko | Abadali be-Intanethi
Ubugcisa begraphic baziswa kakhulu kwihlabathi loyilo lwegraphic. Kangangokuba ushicilelo lube yinxalenye ye-50% yetotali kwiziqwenga zeprojekthi yoyilo.
Kulo myalezo, sichaza ukuba yiyiphi i-flexography, uhlobo lokushicilela olusetyenziswa ngokubanzi kuyo yonke i-package design kwaye kungekhona nje kuphela, kodwa iyinxalenye yecandelo leentengiso kunye nentengiso. Indlela yokunxibelelana nenkampani yethu kwaye uyiprojekthi ngendlela enzulu neyobuchule.
Apha sichaza igama uguquko kwaye sicacisa ukuba zeziphi iimpawu enazo.
2 imbali encinci ngakumbi
5 Iinkampani zeFlexography
Igama elithi flexography okanye ekwabizwa ngokuba yi-flexographic printing, yenye yezininzi iindlela kunye neendidi zoshicilelo ezikhoyo kwihlabathi loshicilelo. Yintoni ebonakalisa le ndlela eyaziwayo kukuba basebenzise ukusetyenziswa kwamacwecwe ngendlela yokunceda apho ishicilelwe kwii-substrates ezahlukeneyo kule meko siyazi njengeefilimu ze ipolyester, inayiloni, isinyithi, iphepha, ikhadibhodi okanye iingubo, ezingezizo amalaphu.
Le ndlela yokushicilela yenzeka ekuqaleni kweminyaka yee-20 eUnited States kodwa iye yaseFransi. Ukususela kumzuzu wokuqala ushicilelo oluthiywe ngokutsha lwe-aniline apho zazibalaseliswa ngakumbi ii-inki okanye ibala elincinane elalisetyenziswa ngelo xesha. Kumashumi eminyaka kamva, yaqanjwa kwakhona njengoko siyazi namhlanje, i-flexography.
imbali encinci ngakumbi
Ngowe-1890 uBibby Baron wayila umatshini wokuqala eyayiquka icylinder yokushicilela encediswayo yeenqaba ezinemibala ejikeleze igubu ukuze kuprintwe iingxowa zephepha. Inyaniso kukuba ukuqulunqwa njengokuba kunjalo akuzange kuphumelele, kodwa ngokwenene kuthathwa njengemvelaphi yomatshini wokuqala wokushicilela we-flexography njengoko siyiqonda namhlanje.
Emva kweminyaka embalwa, ngo-1905, umatshini wokuqala we-flexographic wawunelungelo elilodwa lomenzi yenzelwe ukuprinta iingxowa zephepha, ezazisebenzisa ioyile ye-aniline exutywe etywaleni njengeemibala. Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, le nkqubo yayisele yaziwa eJamani njengoshicilelo lwerabha.
I-Flexography isetyenziswe njengenkqubo yokushicilela Yaqanjwa eFransi ngo-1905 nguHouleg. Yinkqubo yokushicilela ephezulu yoncedo, apho ezinye iindawo zepleyiti ziphezulu kunezinye kwaye zizo ezishiya umbono wazo ephepheni.
Inkqubo eneneni iyafana naleyo isetyenziswa yi-typography, umahluko ulele kumacwecwe asetyenziswayo. Ngelixa kwi-typography i-plate ingaba lukhuni ngakumbi, izinto ezisetyenziselwa i-flexography, njengoko igama layo libonisa, liguquguqukayo kunye ne-rubbery. Enyanisweni, ekuqaleni inkqubo yayisaziwa phantsi kwegama loshicilelo ngetshungama.
Nguye eyona ndlela isetyenziswayo yokufaka isitampu kwizikhongozeli kunye neepakethe. Ngeminyaka yee-50, obu buchule buphuhlise ushicilelo ngotywala ne-inki esekwe emanzini endaweni yokusebenzisa ezo zemveli ze-aniline, ezaziyityhefu ngakumbi. Kamva i ukusetyenziswa kwamacwecwe asekelwe kwiifotopolymers endaweni yeerabha, kuye kwathetha inguqu kubuchule.
Kwicandelo loshicilelo, ezintathu zokwakha ziyafumaneka eyahluke omnye komnye kwaye ngamnye ulungelelanisa kumatshini we-flexo.
Ezona ziphambili zezi: oomatshini bokushicilela be-drum flexo, i-stack flexo machines kunye ne-inline flexo machines.
Aba matshini benziwe: i-anilox roller eququzelela ushicilelo oluchanekileyo, inkqubo yeblade kagqirha enegumbi le-inki elibonelela ngexabiso elifunekayo le-pigment ngaphakathi kwi-roller, i-cylinder yepleyiti efakwe kuyo ipleyiti yokushicilela, i-cylinder yokushicilela apho. i-substrate iphumle njengoko ipleyiti yokushicilela iyicinezela, kunye nenkqubo ye-inki.
Inkqubo ilula kakhulu njengoko ngexesha lenkqubo yoshicilelo inki impontshwa nge Ingaphakathi kwigumbi le-inki lenkqubo kagqirha esele siyichazile ngasentla. Ngaphakathi kweli gumbi, sifumana iincakuba ezimbini ezithatha i-inki ngelixa inxibelelana ne-anilox roller.
Le roller ishukuma kwaye ijikeleze ukuze umphezulu wayo udibane nokukhululeka kwamacwecwe okushicilela akwi-cylinder, ngaloo ndlela idlulisela i-inki eqokelelwe ngamacangca kagqirha.
Iingenelo zale nkqubo yoshicilelo zibaluleke kakhulu kumajelo eendaba okanye iphepha elikhuphisanayo kwimarike ye-offset.
Aba matshini banexabiso eliphantsi, oko kukuthi, aba matshini baxabisa kakhulu ukuba sibathelekisa neoffset nehollow yokushicilela, yaye iziphumo ezifanayo ziye zifikelelwe kwezinye iiprojekthi ezenziwayo.
Ayinabala okanye ishiye uphawu emqolo ekubeni kunjalo umatshini oguquguqukayo ngokufanelekileyo nangona ukhululekile kakhulu.
Iipleyiti nazo zitshiphu kakhulu kwaye azibizi, nto leyo ethetha ukuba imathiriyeli inexabiso eliphantsi kwaye inexabiso eliphantsi kwimisebenzi emincinci ukuya kwephakathi. Nangona kunjalo, zisabiza kakhulu kuneepleyiti ze-offset.
Ziqulethe izantya ezinkulu zoshicilelo, oko kwenza inkqubo ngokukhawuleza kwaye kulula.
Kukho ukuqina okumisela umbala, oko kukuthi, inkqubo ye-inking ivumela ulawulo lombala ukuba lugcinwe kulo lonke ixesha lokuprinta, eliqinisekisa ukunyaniseka kokuveliswa kwayo.
Ukuguquguquka kokukwazi ukuprinta kwiinkxaso ezithathayo kunye nezingafakiyo, ngaphezu kokukwazi ukusebenzisa iifomati ezininzi ezahlukeneyo, kuvumela umgca wemveliso ukuba ilungela iindidi ezininzi zeemarike.
Zimbalwa kakhulu iingxaki ezikhoyo kwi-flexography, uninzi lwazo zezi:
Yenza isiphumo se squash eyonakalisa imvakalozwi kunye nokuhambelana kombala.
Izigwebo eziphantsi ngenxa yohlobo lweplate esetyenzisiweyo, kuthetha ukuba umgangatho womfanekiso awuphezulu ngokwaneleyo.
Kukho ukuguqulwa ekubeni inkqubo yemibala emine ithande ukuba nemida ethile.
Izicelo ezaziwa kakhulu kolu hlobo loshicilelo zidla ngokubonwa ngaphezu kwazo zonke kwiimveliso zokutya ezahlukeneyo, oko kukuthi, kwinto nganye yokwenziwa kwee-wrappers. Yiyo loo nto, njengoko besitshilo ngaphambili, icandelo lokupakisha. Kungenxa yoko le nto sihlala sifumana:
Ukusonga kunye nokupakishwa
Cellophane okanye iplastiki
Iimathiriyeli ezinzima ngakumbi njenge-tetrabriks
Izikhongozeli zobisi neziselo
Iingxowa zephepha kunye neeplastiki
iibhokisi zephepha eziqinileyo
Iipakethe zomntu ngamnye ezifana neeglasi kunye nezikhongozeli kunye neelebhile kunye neempawu.
diflex yinkampani eyasekwa ngo-1995 kwaye isekelwe eMadrid (eSpain), yinkampani eyimpumelelo, ethi ngexesha elifutshane, inkampani izuze udumo lomgangatho, ukuhambelana, ixesha elifutshane lokuhambisa, inqanaba eliphezulu lenkonzo kunye nokutsha rhoqo.
Yinkampani enombono ocacileyo kunye nobizo lobunkokeli olusekela impumelelo yayo kumava abasebenzi bayo, kwaye ayikhathali ngokutyala imali kumaziko okusebenzela agqwesileyo kunye neziseko zophuhliso lwangoku.
U-Esko wazisa i-HD Flexo kwihlabathi le-flexo yokushicilela, kwaye ukususela ngoko iinkampani ziye zahamba zisuka kwimveliso ye-gravure. Izibonelelo zilungile kakhulu ukuba zingahoywa: okokuqala ngqa i-flexo printing rivals umgangatho wegravure kunye neletterpress yoshicilelo.
Yiqonga lobugcisa eliqhelekileyo kwiinkampani zelizwe le-flexography kunye nekhonkco lexabiso elipheleleyo, ukubonelela zonke izixhobo eziyimfuneko ezivumela abashicileli ukuba baqhube okanye baphucule umsebenzi wabo kwiindawo ezahlukeneyo kunye namacandelo.
Ukubonelela ngolwazi kunye nolwazi ngeenkomfa zonyaka zobugcisa, uqeqesho, amanqaku obugcisa, iintlanganiso eziqhelekileyo, iincwadana zeendaba zenyanga kunye ne-FTA yaseYurophu, i-Flexographic Technical Association, emele iimfuno eziqhelekileyo ze-European flexographic industry printing.
I-Fina inemvelaphi yayo kwishishini losapho i-Rotogravure Fina, eyasungulwa ngo-1974, igxile ekushicileleni imidiya eguquguqukayo yokupakishwa kwabathengi. namhlanje kulungile, inikeza izisombululo eziphambili kunye nezilungiselelweyo, kwi-gravure kunye ne-flexography, kwiinkampani ezikhokelayo zokutya kunye namanye amacandelo.
Ukongeza, inobukho obubonakalayo bamazwe ngamazwe, kunye nokuthunyelwa ngaphandle eJamani, eFransi, ePortugal nase-United Kingdom. Ukwenziwa kwezinto ezintsha, ubuchwephesha bemeko yobugcisa kunye nokugqwesa kwenkqubo, ngentlonipho enkulu yokusingqongileyo, zizitshixo zefilosofi yeFina.
Ukuba ufikelele esiphelweni sesithuba, singongeza kuphela ukuba sinethemba lokuba ufunde ngakumbi malunga nobu buchule bokushicilela obusetyenziswa iminyaka emininzi kwaye inembali.
Iinkampani ezininzi zibheja kwi-flexography njengendlela ephambili yokuvelisa, kuba ngumsebenzi ofunwa kakhulu kumazwe ahlukeneyo. Ukongeza, uninzi lweemveliso esizithengayo kwaye esizityayo kwimihla yethu, kwipakethe nganye okanye i-wrappers, inkqubo eyahlukileyo ye-flexography yenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni iflexography?
Ii-Isotypes: yintoni na kunye nemizekelo
Uyisebenzisa njani iPhotoshop